Nandritra ny andro fankalazana ny mariazy tamin’ny toeram-pilanonana manamorona ny lalam-pirenena voalohany iny no nitranga ny disadisa, herinandro vitsy izay. Vaky ny fitaratry ny “espace”, potika ny ankamaroan’ireo lovia sy vera ary ny fanaka mora vaky nandritra ny gidragidra niseho tao amin’ny toeram-pisakafoana sady fandihizana. Fifanindriana amin’ny resaka mpanankarena mahihitra no fototry ny fifanafintohinana. Samy miseho ho manan-katao ireo fianakavian’ny mpivady avy eo Anosibe kanefa nifampiandriandry amin’ny fandraisana andraikitra sy nifanjanana tamin’ny adidy ary nahihitra amin’ny vola mivoaka. Raikitra ny latsa sy ny teny mandratra izay nifanakalozan’ny avy amin’ny an-daniny sy an-kilany. Ny maripanan’ny fety ihany koa efa niakatra avo noho ny fandraisana zava-pisotro misy alikaola.
Ankoatra ny toeram-pilanonana izay nitory ireo mpivady vao noho ny fahasimban-javatra sarobidy, nifampitory ihany koa ireo fianakavian’ny lahy sy ny havan’ny vavy. Marihina anefa fa mpivady vita mariazy izy roa kely ka tsy ravan’izany savorovoro izany fa miara-monina hatrany hatreto.